Simplest Happiness Kutengeserana Mimhanzi - Dhizaini magazini
Kutengeserana Mimhanzi MuChinese zodiac, 2019 ndiro gore renguruve, saka Yen C akagadzira yakarukwa nguruve, uye iyo pun mune "mazhinji anopisa mafirimu" muChinese. Iwo anofara mavara anoenderana nemufananidzo wesiteshi uye nemanzwiro anofara ayo nzira inoda kupa kune vateereri vayo. Vhidhiyo yacho kusanganisa kwezvinhu zvina zvemumafirimu. Vana vari kutamba vanogona kunyatsoratidza mufaro wakachena, uye tariro kuti vateereri vachange vaine manzwiro akafanana vachiona iyo firimu.
Zita rechirongwa : Simplest Happiness, Vagadziri zita : Yen C Chen, Izita remutengi : Fox Movies.
Kutengeserana Mimhanzi Yen C Chen Simplest Happiness